Cell Solar Mapaneru, Akaenzana Solar Mapaneru, Diki Saizi Mapaneru eSolar - Amso
Amso Solar akasarudzika mukugadzirwa kwemaseru ezuva uye mapaneru ezuva anovimbiswa nemakore edu makumi maviri neshanu warandi. Yedu yezuva mapaneru ekugadzira mitsara inovhara iyo 5BB uye 9BB akateedzana, simba renji zvakanyanya kubva pa5w kusvika 600w.
9BB 144 hafu maseru ezuva mapaneru ese madema mono ...
9BB 144 hafu maseru ezuva mapaneru mono 430w
72 maseru akaenzana saizi mono dema maseru ezuva ...
Mini solar mapaneru akagadziriswa maseru poly 20w
Amso Solar Technology Co., Ltd. inogadzira mapaneru ezuva akagadzirwa anopfuura gumi nemaviri makore. Tine zviitiko zvizere mune ese maOEM uye maODM services. Kwemakore apfuura, Isu takamisa makambani akasimba ane akawanda mabrandi uye tier imwe vagadziri. Isu takatangwa zviri pamutemo muna2017 kuti tiunze marita edu: Amso Solar. Fekitori yedu iri padhuze neakanaka HongZe Lake, iri muHuaian, JiangSu, China.
chii chinonzi 9BB solar panels
Mumusika uchangopfuura, unonzwa vanhu vachitaura nezve 5BB, 9BB, M6 mhando 166mm maseru ezuva, uye hafu akacheka maseru ezuva. Unogona kuvhiringidzika neaya mazwi ese, ndeapi? Chii chavanomira? Ndeupi musiyano uripo pakati pavo? Muchikamu chino, isu ticha tsanangura muchidimbu zvese pfungwa zvataurwa ...
ndezvipi zvinhu zviri mupaneru rezuva
Chekutanga pane zvese, ngatitarisei pazvidimbu zvemadhigiramu ezuva. Iyo yepakati yakatetepa ndiwo maseru ezuva, ndiwo akakosha uye akakosha chikamu cheplaneru yezuva. Kune akawanda marudzi emaseru ezuva, kana tikakurukura kubva pahukuru saizi, iwe unowana matatu makuru maseru ezuva ...